China Sandblast Glass Beads 120 # Famokarana sy ozinina | olan
Vinaingitra vita amin'ny vera BS6088A
Mitete amin'ny vakana fitaratra EN1423
Mitete amin'ny vakana fitaratra BS6088B
Vakana fitaratra 1.7 ho an'ny làlana ...
Sandblast Glass Beads 120 #
Ny vakana fitaratra ho an'ny sandblasting dia manana endrika mampiorina ny fihenan'ny simika, ny hamafin'ny mekanika ary ny hamafiny. Izy ireo dia azo esorina amin'ny tampon'ny zavatra amin'ny rivotra voafehy ary azo ampiasaina amin'ny vera fametahana, fingotra, plastika, bobongolo miaraka amina fanariana vy na famatrarana. Ny bolongam-pandehanana dia manampy amin'ny fampihenana ny elastika avy amin'ny fitaovana ambonimbony ary hampitombo ny fahafaha-mitafy.
Vakana fitaratra sandblasting miaraka amin'ny toetran'ny sasany amin'ny hamafin'ny mekanika, ny tanjaka ary ny fitoniana simika matanjaka. Izy ireo dia novokarina avy amin'ny vera silica vita amin'ny sômazy ary azo ampiasaina ho fitaovana fanalefahana hanafoanana ireo karazana tsy fahalavorariana amin'ny endriny maro, ao anatin'izany ny fanadiovana vy, ny famaranana ny tany, ny famafana ary ny famaohana. Izy io dia mampihena ny fahitana ny fahasimbana mety hitranga, ny gorodona, ny kilema kely kokoa aorian'ny fangejana, ny fikosoham-bary na ny fikajiana ny toerana ary mampiakatra ny fanoherana ny harafesin'ny vokatra ary manampy amin'ny fampitomboana ny fahafaha-manao akanjo.
Ny fanapoahana vakana fitaratra dia mety tsy amin'ny fitsaboana farany ny vokatra vaovao na ho fitsaboana mialoha alohan'ny fizotry ny simika (electroforming, oksidasiana anodika), miaina aina vaovao amin'ny zavatra antitra koa, na singa moto, zavakanto sy zavatra haingo na kojakoja anatiny.
Ny famaohana amin'ny vakana fitaratra amin'ny tsindry dia hitazona ireo vokatra tsy misy fiovana refy, tsy misy loto ary tsy misy fanindriana. Izy io dia mamokatra famaranana metallurgical tsy miovaova. Fitaovana fanapoahana mahazatra toy ny Aluminium Oksida, fasika, tifitra vy dia hamela horonantsary simika eny ambonin'ny faritra nipoaka na hanana hetsika fanapahana. Ny vakana fitaratra amin'ny ankapobeny dia kely sy maivana kokoa noho ny haino aman-jery hafa ary azo ampiasaina hipoitra ao anaty tariby maranitra misy kofehy sy faritra marefo izay ilana hery lehibe tokoa. Ny Shot Blasting amin'ny Glass Beads dia manomana tanteraka ny metaly misy karazana firakotra eo amboniny toy ny hosodoko, ny fametahana enina ary ny fitaratra fitaratra. Ny tombontsoa fanampiny amin'ny fanapoahana vakana fitaratra dia misy fa azonao ampiasaina mandritra ny bisikileta vitsivitsy alohan'ny tsy hanadiovany ny faritra intsony. Matetika ny haino aman-jery vita amin'ny vakana fitaratra dia maharitra 4 - 6 alohan'ny tokony hosoloina. Farany, ny vakana fitaratra dia azo ampiasaina amin'ny kabinetra manapoaka na fanerena. Izany dia mahatonga azy ho be mpampiasa ary afaka manampy amin'ny fanolorana haino aman-jery fanadiovana fipoahana izay mitazona ny vidin'ny kabinetra nipoakao.
Ny vakana vita amin'ny vera ampiasaina ho toy ny fitaovana fanapoahana dia miaraka amin'ny fisehon'ny mazava, ny hamafiny ary ny hamafiny. Izy ireo dia mety amin'ny fanadiovana sy fandefasana burrs sy loto amin'ny endrika bobongolo isan-karazany mba hahafahan'ny lahatsoratra voadinika hahavita tsara sy hanalava ny androm-piainany. Ny famerenana amin'ny laoniny dia mahatonga azy io ho safidy ara-toekarena. Ny natiora simika an'ny vakana fitaratra dia tsy mitongilana ary tsy misy poizina, mandritra ny fampiasana, tsy misy vy na zavatra manimba hafa mijanona eo ambonin'ny sehatry ny asa, ary tsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo manodidina. Ny boriborin'ny faritra malama dia tsy misy fahasimbana amin'ny marindrano mekanika an'ilay zavatra miasa mandritra ny fizotran'ny sandblasting. Fampiharana tsy manam-paharoa ho an'ny fanapoahana vakana fitaratra dia ny peening, izay manampy ny metaly hanohitra tsara kokoa ny havizanana sy ny vaky noho ny fahasosorana amin'ny fihenjanana. Ny fandinihana iray dia nahatsikaritra fa afaka mampitombo ny tanjaky ny havizanana eo amin'ny 17,14%. Manome anao famaranana satin manintona izy io amin'ny fampitomboana ny faharetan'ny vokatra.
Famaritana vokatra lehibe momba ny sandblasting araka ny latabatra manaraka:
No. Savaivony (à) Haben'ny sivana mifanaraka amin'izany
Afaka misafidy vakana fitaratra habe samihafa ianao eo anelanelan'ny 45um-850um arakaraka ny asany isan-karazany.
Vakana fitaratra matanjaka be (ho an'ny fipoahana)
Miaraka amin'ny rivotra voafintina toy ny herin'ny hery misimisy, ity vokatra ity dia vita amin'ny famafazana vakana eo ambanin'ny hafainganam-pandeha sy ny tsindry ambonin'ilay sangan'asa ho an'ny famolahana sy ny famolahana.
Ny tanjon'ny vokatra dia ireto manaraka ireto:
1. Mazava ny bobongolo misy fiantraikany amin'ny forging, forging, vera, fingotra ary plastika, fanariana vy sy fitrandrahana.
2. Esory ny fihenjanana mihetsiketsika, hampitombo ny fiainana reraka ary hanatsara ny fanoherana ny harafoana. Ohatra, turbo motera fiaramanidina, vane, shaft, undercarriage, loharano sy fitaovana hafa, sns.
3. Diovina ary esory ny sisin'ny slitter ary alavao eo amin'ny takelaka boribory sy ireo transistors vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika alohan'ny fametahana stannum
4. Esory ireo fotony ao amin'ny piston sy varingarina ary omeo faritra marevaka sy tsy misy ilana azy ireo fitaovana mekanika ara-pitsaboana sy faritra amin'ny fiara
5. Clear electromotor sy ny faritra toy ny loop, borosy elektrika ary ny rotor mandritra ny fanamboarana mavesatra
6. Diovy sy esory ny fantson'ny fantsom-by ary atsofohy tsara ny fantsom-by tsy ferrous. Ampiasaina amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fandefasana ny milina lamba.
Vakana fitaratra matanjaka be ho an'ny fipoahana
Type harato Grain Size μ m
Araka ny fitakian'ny mpanjifa.
Previous: Sandblast Glass Beads 150 #
Manaraka: Sandblast Glass Beads 100 #
Haino aman-jery Sandblasting Glass Bead
Vakana fitaratra ho an'ny sandblasting mahery
Vakana fitaratra ho an'ny sandblasting
Vakana fitaratra ho an'ny tanjona sandb mandrakizay
Mpamatsy fasika sandoka mandrakizay
Vakana fitaratra ampiasaina amin'ny milina Sandblasting
Glass microspheres ho an'ny sandblasting
Hamafin'ny 6-7 Mohs vakana fitaratra
Vakana vita amin'ny Sandblast Glass
Orinasa Sandblasting Beads any Shina
Sandblast Glass Beads 180 #
Sandblast Glass Beads 60 #
Vakana vita amin'ny alim-baravarana alimina (1.93nd)
Fitotoana vakana fitaratra 4.0-5.0mm
Fitotoana vakana fitaratra 0.8-1.0mm
Vakana fitaratra miloko 6-9mm